Shiftaan eenyu akka ta'e, ifa ta'aa jira; silas dhugaan ni qal'ata malee hin citu!! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShiftaan eenyu akka ta’e, ifa ta’aa jira; silas dhugaan ni qal’ata malee hin citu!!
Shiftaan eenyu akka ta’e, ifa ta’aa jira; silas dhugaan ni qal’ata malee hin citu!! #OPDOn jaarmiyaa aadaa mootummaa hin beekne. Oromoo abbaa fi ilmaan hiraarsaaa jirti.
“Maatii guutuu haranii hojii isaaniirraa qabanii mana hidhaatti naqaa jiru. Waan bara TPLF keessallee raawwatee hinbeekne ta’aa jira bara OPDO kana ammoo. Obbo Abarraa Toolasaa baatii muraasa dura qabanii hidhani. Har’a ammoo ilma isaanii Heenok Abarraa qabanii hidhan jechuu dhageenye”